JDBC daatubeeze shiqishate doorubba badanno.
LibreOfficewiinni daatubeeze JDBC oofaanchi booso JDBC daatubeezera JDBC horoonsira dandaatto. Oofaanchu booso daatubeeze loosaasinchinni aamantino. Odoo nna MySQL JDBC daatubeezubbara lame lawishshuwaati.
Solarisetewiinni woy Linukisetewiinni Odoote daatubeeze shiqishate JDBC oofaancho horoonsira dandaatto. Daatubeezexullaalluwatewiinni shiqishate, ODBC oofaancho hasiri.
daatu Bue URL saaxine giddo, odoote daatu bue owaataanchi. URL ganallo daatubeeze dani aana irkidhanno. Roore mashalaqqera JDBC ofaanchiwiinni dayino bortajishsha lai.
Odoote daatubeezera, URL ganallooti:
wosinsaanchu su'mi odoote daatubeeze harissanno maashiine su'maati. Qolteno wosinsaanchu su'ma owaataanchu teesso IP nni riqiwa dandaatto.
lawo odoote daatubeeze macciishshubba lawooti. Halaalanya teesso lawora daatubeeze gashshaanchokki xa'mi.
daatubeeze_su'mi odoote daatubeeze su'maati. Halaalanyu su'mira daatubeeze gashshaanchokki xa'mi.
MySQL daatubeezera oofaanchu MySQL weebisaate aana shiqino.
MySQL daatubeezera ganallote:
wosinsaanchu su'mi MySQL daatubeeze harissanno maashiine su'maati. Qolteno wosinsaanchu su'ma owaataanchu teesso IP nni riqiwa dandaatto.
lawo MySQL daatubeezubbara gadete lawooti, su'munni 3306.
daatubeeze-su'mi daatubeeze su'maati.
Daatu bue URL
JDBC Oofaanchi Booso
Amadisiishsha xaa qineessonni jifanno.
Title is: JDBC Amadisiishsha